नेपाल घुम्दै पर्यटनवर्षको प्रचार गर्दैछन् विदेशी राजदूत – Janata Times
नेपाल घुम्दै पर्यटनवर्षको प्रचार गर्दैछन् विदेशी राजदूत
काठमाडौँ, कात्तिक १७
नेपालका लागि अस्टे«लियाका राजदूत पिटर बडले हालै मात्र गोक्यो ताल, चोला पाससहित सगरमाथा आधार शिविरसम्मको पदयात्रा गर्नुभयो । १२ दिने यात्रामा त्यस आसपासका तस्बिर उहाँले ट्विटरको आफ्नो आधिकारिक ‘ह्यान्डल’मार्फत निरन्तर ‘पोस्ट’ पनि गरिरहनुभयो । पदयात्रापछि उहाँले लेख्नुभयो ‘कस्तो अविश्वसनीय अनुभव अनि कति सुन्दर देश !’
राजदूत बड मात्र होइन अन्य देशका राजदूत पनि पछिल्लो समय नेपालका फरक ठाउँहरू घुमघामका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेको भेटिनु हुन्छ । ट्विटरमा निकै सक्रिय नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत ¥यान्डी बेरीले गत हप्ता मात्रै आफ्नो पछिल्लो यात्रा पोखरामा गर्नुभयो । अनि त्यहाँको बसाई आफूलाई अविश्वसनीय आराम दिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसअघि ल्हो मान्थाङ्सम्मको टे«किङ मात्र नभई काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै विभिन्न ठाउँमा नियमित घुमघामको अनुभवसहितका तस्बिर उहाँले ट्विटरमा राख्नुभएको छ । त्यति मात्र नभई नेपालका मौलिक परिकार र संस्कृतिको अनुभव उहाँका ट्विटमा प्रायः भेटिने सामग्रीहरू हुन् ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छी पनि नेपाली कला, संस्कृतिसहितका पोस्ट आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट गरिरहनुहुन्छ । उपत्यकाका फरकफरक ठाउँका घुमघामको तस्बिरसहित उहाँले ‘मेरो मनमा नेपाल ! नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सफलताको शुभकामना –’ लेखेर दुई महिनाअघि गरेको ट्विट धेरै ट्विटर प्रयोगकर्ता नेपालीले मन पराए ।
सगरमाथा क्षेत्रमै गएर पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा योग गरिरहेको तस्बिरसहित नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले आफ्नो पहिलो ट्विट गर्नुभयो । उहाँको उक्त ट्विटलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत रिट्विट गर्नुभएको थियो । त्यसबाहेक ल्हो मान्थाङ्सम्म पुगेको अनभुव पनि राजदूत पुरीसँग छ ।
कार्यकालको अन्तिमतिर रहनुभएका नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रिचार्ड मोरिसले आफ्नो नेपाल बसाईको सम्झनास्वरूप घुमघाम अनुभवका तस्बिरलाई राख्नुभयो । त्यसअघि दशैँ बिदाको उपयोग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको टे«किङ गरेर बिताएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यति मात्र हैन नेपाल घुमघामका लागि बेलायती नागरिकलाई आवश्यक तयारीको सुझावसहितको आधिकारिक ‘लिङ्क’ पनि उहाँले त्यसमा समेट्नुभएको थियो । गत बिहीबार मात्रै फिजीका लागि बेलायती राजदूतका रूपमा नियुक्त हुनुभएका मोरिसले आफ्नो ट्विट ह्यान्डलमार्फत नेपालका मौलिक परिकार र संस्कृतिसहितका तस्बिर पोस्ट गर्नुभएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दीपकराज जोशी नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा राजदूतहरूको यस्तो सक्रियता निकै सहयोगी हुने बताउनुहुन्छ । यस्तो घुमघामले उहाँहरूलाई नेपालबारे थप बुझ्न सहयोग पु¥याउँछ, उहाँले भन्नुभयो, यस्तो बुझाइले सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग जुटाउन पनि सहयोग गर्छ । यस्तो घुमघामले विश्वमा नेपालको फरक अनुभव प्रस्तुत गर्ने र त्यसले भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धनमा पनि सहयोग पु¥याउने उहाँको बुझाइ छ ।
राजदूतहरूको टेकिङलगायतका विभिन्न पर्यटकीय गतिविधि सम्बन्धित देशका नागरिकलाई नेपाल भित्रायाउन राम्रो सन्देश हुने टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी बताउनुहुन्छ । ‘राजदूतहरूको घुमघामले सम्बन्धित देशका नागरिकलाई नेपाल घुम्न जानुपर्छ भन्ने पे्ररणा हुनसक्छ, उहाँले भन्नुभयो । यसबाहेक टे«किङमा संलग्न सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तारको अवसरका रूपमा रहने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरी २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसै सन्दर्भमा जनवरीको पहिलो हप्ता सम्भव भएसम्म नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति भएका देशका पर्यटन मन्त्रीलाई समेत नेपाल ल्याउने योजना सरकारको छ । यसै सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका नेपालका लागि राजदूतहरूसँग छलफल पनि गरिरहेको छ ।
Related tags : नेपाल घुम्दै पर्यटनवर्षको प्रचार गर्दैछन् विदेशी राजदूत
यसरी यौन सम्पर्क कायम राख्दा रहँदैन गर्भ
सुनका असर्फी खोसेर मात्र लिएन, जेलमै कोचेर यातनासमेत दियो : नन्दलाल (यसरी भेटिएको थियो सुनका असर्फी)
छाङ्गरूमा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट बनाउन टेण्डर आव्हान
खतिवडालाई हटाउन लागेका भनिएका व्यापारी को हुन् ? यस्तो छ उनिहरु र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध